Ọmụmụ ihe - CAPSI
Ọmụmụ ihe na-enye ọmarịcha uru okpukpu abụọ. Ha bụ ngwá ọrụ nkuzi dị irè nke ukwuu, na-enyere ụmụ akwụkwọ aka itinye onwe ha na akpụkpọ ụkwụ nke onye dị adị n'ezie na nzukọ n'ezie ma chee echiche banyere otu esi edozi nsogbu ndị dị n'ụwa.
N'ime nke a, ụmụ akwụkwọ ahụ na-amụta karịa naanị echiche nke usoro ọmụmụ n'onwe ha, kamakwa otu esi eche echiche, nkatọ na itinye ha n'ọrụ. Na mgbakwunye, ha na-enye ụzọ iji dekọọ ihe omume na ijikwa ihe ọmụma nke òtù dị iche iche n'ụzọ dị mfe, ka anyị niile nwee ike ịmụta site na ahụmahụ ha ma mee ememe ha rụzuru.
Okwu ikpe nke ụlọ akwụkwọ ikpe nke Wits Business School's Case Center dere na CAPSI n'ime afọ abụọ gara aga enwetala nke ahụ ma ọ bụụrụ ihe na-atọ ụtọ iso na ọrụ a. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị lelee ọmụmụ ihe anyị dị wee budata abtracts nke ndị a.
Iji rịọ ohere ịnweta ọmụmụ ihe n'uju, biko kpọtụrụ ndị Wits Business School Case Center.
Ntọala Mmepe Obodo Kenya: Mgbakwụnye Ọchịchị
West African Civil Society Initiative: Ịgba mbọ maka nkwado
Ọrụ afọ ofufo na oge mepere emepe: Ihe ịma aka nke nlekota na nyocha
Ndị South Africa Trust: Ịbanye njem na-adịgide adịgide
Stanley Mliwa: Ihe nketa na-achọ azịza nke ọma
Ntọala Sawiris maka mmepe mmekọrịta ọha: Mkpebi ime n'oge nsogbu
Vodacom South Africa: Na-achọ nzaghachi nke CSR nwere na COVID-19